Drum တီးတဲ့လူခမျာ Drum ကိုတောင်မကြည့်နိုင်တော့ဘူး ဟိဟိ
ဟုတ်ပ။ အလွတ်ကျက်နေပုံရတယ်… ဟီဟိ။ ရအောင် ရှာတင်ပေးတာကိုတော့ ချီးကျူးတယ်ဗျာ…
ရှုစားရတာ မိုက်တယ်နော့ … ဟားဟား …
naing win moe says:
အင်း…အိမ်က madam ကြီးနဲ့ ကတော့ လဲလိုက်ချင်ပါဘိ..ကောင်းထှာ
ကိုစေတန် အရှာအဖွေ တော်တယ်ဗျာ့ …
madan နဲ့ ကွာပါ့
so so so nice but
so so so sexy is not myanmar
aww lar pyan p lu twe lu twe …………………..
ko myat chae ko ma myin kya bue
အမေရိကလာရင်မဝတ်နေပါနဲ့ တော့လို့ 
အောက်က ပရိတ်သတ်ဆို အတွင်းခံလောက်တော့ လှမ်းမြင်ရလောက်တယ်နော်
လူစိတ်ဝင်စားမှု နှုန်းကတော့ တစတစမြင့်တက်လာပါပြီ
ရှုစားရတာ ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ ဂလု ………
၀ိုင်းစုရေ တို့တော့ အားပေးနေမယ်ဟေ့။ ဖော်နိုင်သလောက်ဖော်ပေးပါ။ မင်းကို အမြဲမှန်းပြီး စိတ်ကူးနေမယ်။
အကုန် မြင်ရရင် ဘာလုပ် ကျြမှာလည်းပာင်…………။
ကျွန်တော်လဲမြင်ရရင် ကြိုးတင် ပြင်စဉ်ထားချင်လိုပါ..။
ပြန်ချင်ရင်လည်း ဝတ်မနေနဲ့လို့ အဲ့ဒါပိုမိုက်တယ်….
ထွန်းလွင် ဦး says:
၀ိုင်း လေး ၇ယ် တောင် နေပြီနော်
လွင်စိုး ဟိန်း says:
ဘယ် ပြောကောင်း မလဲဝိုင်းလေး၇ယ်
bikini ဆိုရင် ပိုတောင်မိုက်မယ်။ နောက်ဆိုရင် ဒီထက် ဖော်နိုင်ပါစေလို့ ။
အမြင်မှန်ရမလား မှတ်ပါတယ်။ ပိုတောင် တိုသွားပါလားနော်။ ခုတလော ၀ိုင်းစုတင်မက အချို့သော မိန်းကလေးတွေလည်း မလုံမခြုံ ၀တ်စားလာကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အရှက်အကြောက်တရားဆိုတာ ဘာမှန်းမသိ ဖြစ်လာလို့လား မသိပါဘူး၊
ဒီလို မလုံမခြုံဝတ်တယ်ဆိုတာ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အသိတရားမထွန်းကားတဲ့ ကျောက်ခေတ်မှာသာ ၀တ်ကြတာပါ၊ ဟော…. နည်းနည်း အသိတရားလေးလည်း ထွန်းကားလာရော ရှက်တတ်တဲ့ စိတ်လေးဝင်ပြီး မမြင်သင့် မပြသင့်တဲ့ နေရာတွေကို ကာကွယ်ရကောင်းမှန်း သိလာကြပါတယ်။ ဒါလေးကို သတိချပ်ပြီး မိန်းကလေးများ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရှက်စိတ်မရှိ အသိတရားမရှိတဲ့ လုရိုင်းများအဖြစ် မဖန်တီးကြပါနဲ့လို့
ဟုတ်တယ်အစ်မ ကျွန်တော် ဆရာမလူထုဒေါ်အမာရဲ့ ၀တ်သူအပြစ်လား ကြည့်သူအပြစ်လား ဆောင်းပါးမှာ ကျွန်တော့ရဲ့ comment ကို ဖတ်ကြည့်ပါ same to U ပါ
ဝိုင်းစုကဂျိမ်းဘုန်းကြီးသေလို့ လူဝင်စားဖြစ်လာတာမို့ ခွင့်လွတ်ကြပါခင်ဗျာ……..ဒီထက်မကဈန်ဝင်လာဖို့ ဆုတာတောင်းနေကြပါတော့…..
ဝိုင်းစုတစ်ယောက် တို့ ဘကြီးမင်းတုန်းမင်းရှိနေချိန် ဒင်ဘယ်ရောက်နေလဲ တို့ ဘကြီးက ကာမကျမ်းကိုတောင်ပြုစုထားတာနော် ဒင်လောက်တော့ဟင်လို့ တောင်အော်နိုင်မယ်မထင်နဲ့တို့ ဘကြီးကဒါမျိုးဆိုသိပ်ကြိုက်….ဘုရင်ကြီးလှံတိုထောက်အကွက်နဲ့ ဆိုပွဲပြီးသွားမယ်……အခုတော့တို့ ဘကြီးမရှိတော့ ဒင်..“ဗိုလ်ကြီးသေနတ်ထမ်းအကွက်နဲ့ သာနေလေအုံးပေါ့…….
အဲလို ၀တ်တာမကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်……………မြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီ မြန်မာမလေးတွေကို လုံးခြုံစေချင်တယ်
မ၀တ်နဲ့မပြောပါဘူး ၀တ်ပါ..ကြည့်ကောင်းအောင်ဝတ်ပေါ့ အခုဟာက…တော်တော်ကို ကြည့်ရဆိုးတယ်လို့ထင်တယ်
ဟေ့ကောင်.. နာဇီပါတီ။ မင်းအမေနဲ့ အစ်မကို အစ္စလာမ်တွေက ၀ိုင်းကျုံးသွားလို့လား။ မင်းအမေ ဖင်ခံတာ အားမရလို့ သူများတွေကို ခံခိုင်းနေတာလား။ အောက်တန်းမကျနဲ့။ ဘာသာရေး မစော်ကားနဲ့။ မင်းစော်ကားရင် ငါလည်း စော်ကားတတ်တယ်။ ဒါထက်ပိုသိချင်ရင် http://messengerforbuddhist.blogspot.com ကို ဖတ်ကြည့်။ မဖတ်ခင် မင်းအမေနဲ့ တိုင်ပင်ဦး။ မင်းအမေ ဖေါက်သည် ပျောက်သွားဦးမယ်။
ဟေ့ကောင် ဖာသား…မင်းပေးတဲ့ http://messengerforbuddhist.blogspot.com ကိုတင်တဲ့ကောင်က စာကောင်းကောင်းမတက်ဘူးလို့ ငါ့အမြင်ကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်…
စလုံးပေါင်းလေးတောင် မှန်အောင်မပေါင်းတက်ဘဲနဲ့ ဘာသာကြီးတစ်ခုလုံးကို ဘယ်လိုဝေဖန်လိုက်တာလဲ သူငယ်တန်းခလေးတွေတောင်မှန်အောင်ပေါင်းနိုင်မဲ့ဟာဘဲ
အကြံတစ်ခုလောက်ပေးပါရစေ အကြီးကြီးလုပ်ချင်ရင် အဲ့လိုသေးသေးလေးကစ ဂရုစိုက်တက်ရမယ်….
မင်းတို့လိုကောင်တွေ ရှိနေလို့ မြန်မာနိုင်ငံ မတိုးတက်တာ။ နအဖ အကွက်လာသုံးနေတယ်။ ကိုယ် မလုပ်နိုင်ရင် ဘာသာရေး စစ်ဖန်တီးတယ်။ သူများဘာသာစော်ကားတယ်။ တိုက်ပေးတယ်။ မင်းလည်း နအဖ ဘက်တော်သား ပဲထင်တယ်။ ဟေ့ကောင်.. မင်းဘ၀ တိုးတက်ချင်ရင် ဘာသာတရား အကြောင်း ကောင်းကောင်း လေ့လာ။ ခွေးရူးတွေ ကိုက်တိုင်း မင်းလည်း ၀င်မဟောင်နဲ့။ အေးအေးဆေးဆေး တနေရာ မှာ အမြီးခွေပြီး အိပ်နေ။ မင်း အမေ ဖင်ခံ တာကတော့ တပိုင်းပေါ့။
celebrity actor တွေဆိုတော့ ၀တ်မှာပေါ့ ။သူတို့တွေက ပိုက်ဆံရတာကိုး ။ တစ်ခြားလူတွေဝတ်ရင်တော့ အငေးဘဲခံရမှာကိုး..။ ရာသီဥတု နဲ့ လဲ လိုက်ဖက် ပါပေတယ်..။ ပွင့်လင်းမှုလဲရှိလာတာပေါ့..။ ကျန်းမာရေးလဲကောင်းတာပေါ့ ဟဟ..။
ဘာရယ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာ နည်းနည်းတော့ဝင်ပြောလိုက်အုန်းမယ် ဒီ page ကိုဘာသာမရွေးဝင်ကြည့်ကြတာဆိုတော့ ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စော်ကားမှုတွေကိုမရေးကြပါနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှမဆိုလိုပါဘူး ကိုယ့်ဘာသာကိုထိရင်ဘယ်သူမှာမခံနိုင်ဘူးဆိုတာအား လုံးသိမှာပါ ပညာတက်တွေပဲဗျာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိပေါ့ဗျာ ဒီ မှာအားလုံးက ကိုယ့်ဦးတည်းချက်နဲ့ကို ၀င်ရေးကြတာပဲဗျာ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့ ကျွန်တော်တခုလောက်ထက်ပြောချင်တယ် ဗမာတွေမှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုစော်ကားရင်သိပ်မနာကြသလိုပဲ ဘာသာရေးခံယူချက်အားအရမ်းနည်းနေတယ်ဗျာ ကျွန်တော်ကအစပေါ့ ထားပါတော့ဒါတွေကိုထက်ပြောရင်ရှည်နေအုန်းမယ်
၀ိုင်းစုရယ် ကျွန်တော်ဘားမှမပြောတော့ဘူး အားအင်တွေကုန်ခမ်းလို အိမ်သာတံခါးတောင် နဲ့ နေပီဗျာ ကျွန်တော့ကို မနှိပ်စပ်ပါနဲ့တော့ ဂလုဂလု
ကောင်မလေးတယ်ဟုတ် .. အားမပေးချင်ပေမယ့် ဒါက သူ့အလုပ်ဆိုတော့လည်း ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး သာဓုပဲခေါ်လိုက်တော့မယ်။ သာဓု သာဓု ဂလု။
မြန်မာမလေးတွေ အားလုံးတော့ဒီလိုလိုက်ဝတ်ကြမယ်မထင်ဘူးလေ။ မပူကြပါနဲ့။ ဝမ်းနည်းကြပါ။
ဒါမယ့် ဒီဟာမလေးမျိုးတွေနဲ့ မြန်မာမလေးတိုင်းကိုတော့ သိမ်းကျုံးခန့်မှန်းလို့မရနိုင်ဘူး .. ပါးကျိုးသွားနိုင်တယ် .. ကိုယ်တွေ့
(အော် သူများက သူများကို ရိုက်နေတာမြင်ဖူးတာပြောပါတယ်)။
စိတ်ပူသူမိန်းကလေးများ ပိုယဉ်ကျေးကြပါပေါ့။ တန်ဖိုးတွေတောင်ပိုတက်လာဦးမယ်။
အင်း ဒီမှာ စိတ်ဝင်စားစရာနောက်တစ်ခုက ဘာသာရေးဗျ။
ကျုပ်တို့ ဗမာတွေ ဘာသာရေးအားနည်းတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ ပြောချင်ရာလွှတ်ပြောတတ်တဲ့ သူများကို နှိမ်ပြီးမှ စကားပြောတတ်တဲ့ အကျင့်ကိုကပါနေတာ။ဘာသာရေးက ပြဿနာမဟုတ် နှုတ်က ပြဿနာပါဗျာ။ ဗမာအကျင့်လို့ဆိုရင် ရလောက်တယ်။ ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ပဲဆိုပါတော့ဗျာ။ ပြင်ချင်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုက စပြင်နေပါတယ်။
မနာတတ်တာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ရန်ကိုရန်ချင်းမတုံ့နှင်းနဲ့ဆိုတာ၊ သူများကိုထိခိုက်စေပြီး အကျိုးမရှိစေတဲ့စကားမပြောရလို့ဆိုတာ ဘုရားက ဟောထားကြောင်း ဘာသာကို သေချာသိတဲ့သူတိုင်း လိုက်နာတယ်ဗျ။ ဘာသာကို သေချာသိတဲ့သူတိုင်းမှာ သူများဘာသာကိုမစော်ကားတတ်တဲ့ အကျင့်၊အတိုင်းအတာနဲ့ သီးခံတဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဗျ။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါလည်း မပူပါနဲ့ဗျာ။ ဒီလိုပဲ လူမှုဆက်ဆံရေး ကို ကျုပ်တို့ သင်ယူရဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ် .. ရွှေမျိုးဟေ့ တို့ဗမာ
ထင်တောင်မထင်ထားမိဘူးဗျ ဘာတွေမှန်းကိုမသိဘူး မြန်မာတွေလဲ မြန်မာ မဆန်တော့ဘူး
ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ဘာသာတရားတွေပါကုန်ပြီ တို့ လဲဝင်ပြောရတော့မယ်….ဘာသာရေးလမ်းပြပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာတော့ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တော်ဟာ ထိပ်ဆုံးမှာရှိပါတယ် ….ဒါဟာအညင်းပွါစရာမရှိပါဘူး သတ္တဝါတွေအားလုံးကိုတစ်ပြေညီကျောသားရင်သားမခွဲခြားပဲမေတ္တာထားပေးနိုင်ပါတယ် …မျက်လုံးမိတ်ပြီကယ်ပါ ဆည်ပါလို့ ဇွတ်အသင်းပတ်ဝန်းကျင်မခံတာအောင် အော်နေရမဲ့ဘာသာတရားမျိုးလဲမဟုတ်ပါဘူး ….ဖန်ဆင်းရှင် ကယ်တင်ရှင်မျိုးလဲမဟုတ်ပါ….သားတပည့်များကိုအသိအမှန် အမြင်အမှန်ရစေဖို့ စေတနာသန့် သန့် နဲ့ လမ်းပြပေးတဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ နေရာမျိုးမှာတည်ပါတယ်…ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာ ငါဘုရားကို ကိုးကွယ်ပါ ငါကိုမကိုးကွယ်ရင်ဘယ်လို့ အပစ်ရှိတယ် ဘာလုပ်ခံရမယ်လို့ ဆိုတဲ့ချိန်းခြောက်မူ့ မျိုးကိုဘယ်တုံးကမှမဟောကြာခဲ့ပါ….မိမိရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကိုသာကိုးကွယ်ရာပဲလို့ ဆိုဆုံးမထားပါတယ် ….ဒါကြောင့်ဘာသာတရားတွေပါလာမယ်ဆိုရင် …ပြောလာကြမယ်ဆိုရင် တို့ သိသလောက်တော့ပြောရမှာပဲ ထမင်းစားတိုင်း လူတိုင်းဟာအသိအမှန်ရှိမယ်မထင်နဲ့စာတွေတစ်ဖက်ကန်းခပ်အောင်တတ်နေလဲအသိအမှန်ကိုမဝေဖန်နိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေတယ်…ပညာတွေအမြင့်ကြီးတတ်ပြီး အောက်ခြေလွတ် ဘာကိုမှမယုံချင် …ငါဆိုမှငါဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်….အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းလက်မခံ မိရိုးဖလာကြီးအစွဲမျိုးနဲ့ ဒါကိုးကွယ်ပါဆိုပြီး အတင်းမျက်စိမိတ် ဖင်ပူတောင်းထောင်အောင်အကြိမ်ကြိမ်အော်ပြီဆုတွေတောင်းခဲ့လဲ ….အသင်လူသားများဘယ်သူလာကယ်ခဲ့ဖူပါသလဲ….မြင်ဖူးပါရဲ့ လာ….မျှော်လင့်နေတုံးပဲလာ…..တခြားဘာသာတရားများနဲ့ မတူအောင်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တော်က ပြတ်ပြတ်သားသားဟောကြားခဲ့ပါတယ် ကိုယ့်ကိုကယ်တင်မဲ့သူဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားပါပဲလို့သင့်ရဲ့ နားနူစ်ဘက်ကိုဘယ်သူပိတ်ခိုင်းတိုင်း သင်မပိတ်မိပါစေနဲ့သင်ရဲ့ လက်နူစ်ဘက်ကိုဘယ်သူမြှောက်ခိုင်းတိုင်းအသင်မမြှောက်မိပါစေနဲ့ သင်ရဲ့ ဒူးနူစ်ဘက်လဲ မြေသို့ မပွေခလေနဲ့သဘာဝနဲ့ အမှန်တရားကို အသင်မရှက်မကြောက် အလျင်အမြန်သိမြင်နိူင်ကြပါစေ သတ္တဝါများကိုရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ရက်တန်းကရက်နိူင်ကြပါစေ………………
သားသားကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ပါကြာ….မျက်စိလည်မမိတ်ဘူး ဒူးလည်မထောက်ဘူး နားလည်မပိတ်ဘူး လက်လည်အညှောင့်ဘူးနော်…..ဟိဟိ….ဝိုင်းစုရေ ငါ့ညီမလေရေထပ် မတိုနဲ့ တော့အားလုံးလှိုင်းပူးကုန်မယ်နော် နင့်ကြောင့်ဖြစ်လာမှာဆိုတယ်နော် အမှန်တကယ်အသိပေးတာပါ တော်ကြာယို့ ယို့ ရဲ့ ရဲ့ ဆိုရင်တရာခံရှာကြလိပ့်မယ် …ထမင်းစားဖို့ ရရင်တော်တော့လေ…….လောဘမကြီးပါနဲ့BMW . ကားဝယ်စီးအုံးမလို့ လား….မဝယ်ပါနဲ့ တော့ ဆီဈေးကကြီးပါဘိနဲ့ ….မြင်းထီတစ်ကောင်လောက်ပဲဝယ်စီးနော် ဒါမှဘေးကင်းမယ်……
ဟေ့ကောင်.. မင်းငါ့ကို မဆဲခင် ငါ့ပြထားတဲ့ ဆိုဒ်ကို ၀င်ကြည့်ဦး။ ကြားလား။ ဟား ဟား။
အဖေကို ဟေ့ကောင် လို့ မခေါ်ရဘူး ငါ့သားရဲ့.. ဟားဟား
Right View says:
၀ိုင်းစုဆိုတဲ့ကောင်မလေး ကိုမဟုတ်ပါဘူး။ သဲကြီးမဲကြီးရေးနေကြတဲ့သူတွေ ကိုပါ။
သဘောကျတဲ့သူတွေကိုပြောမယ်ဗျာ။ ကဲမလှမပကြီးဆိုရင် သဘောကျမလား?
သဘောမကျတဲ့သူတွေကိုလဲ ပြောပါရစေ။ ကျနော်မိန်းခလေးဝိုင်းစု ရဲ့ပုံကိုအထပ်ထပ်ကြည့်ပါတယ်(ခင်ဗျားယုံမှာပါ) အပြစ်မမြင်မိပါဘူး။
အဆိုတော်တစ်ယောက် စကဒ်တိုတိုနဲ့သီချင်းဆိုတယ်။ အားကစားသမားတစ်ယောက် စကဒ်တိုတိုနဲ့ အပြေးပြိုင်တယ် / တင်းနစ်ရိုက်တယ် စသည်ဖြင့် ဘာမှားနေလို့လဲဗျာ။
တရားမှတ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တောင် အလှအပကိုမြင်ရပေမဲ့ တရားသဘောလေးနဲ့ အော် ငါ့ဟာမဟုတ်ပါလား ငါ့ဟာမဟုတ်ပါလား ရယ်လို့အနတ္တသဘောကိုရှုမှတ်နိုင်သေးတယ်မဟုတ်ပါလား။